How'd it happen and more reports?: တဖြေးဖြေးခေတ်စားလာတဲ့ အများကွန်ယက်ဈေးကွက်အရောင်းစနစ် MLM Marketing ( "affiliate Marketing or home-based business franchising")
အခုလို IT ခေတ်မှာ Network marketing and multi-level marketing စနစ်ကိုလုပ်လို့ မကောင်းဘူးလို့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုဘဲ ပြောပြော ရှေ့ဆက် ဆက်သွားနေမှာပါဘဲ၊ အခုလို Online Advertising အွန်လိုင်းမှာ ဈေးရောင်းနေကျတဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ MLM Marketing ကို နောက်တနည်းခေါ်ဆိုလာတာက နာမည်ကြီးလာတဲ့ affiliate Marketing or "home-based business franchising". တွေဖြစ်သော amazone, Adsense,ebay, commision ဆိုလိုမှာလဲ ဒီစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေရတာပါ၊
Affiliate marketing overlaps with other Internet marketing methods to some degree, because affiliates often use regularadvertising methods. Those methods include organic search engine optimization (SEO), paid search engine marketing (PPC - Pay Per Click), e-mail marketing, content marketing and in some sense display advertising. On the other hand, affiliates sometimes use less orthodox techniques, such as publishing reviews of products or services offered byapartner.
affiliate marketing channels to personal bloggers, writers, and independent website owners. Regardless of web traffic, size, or business age, programs through eBay, Google, LinkShare, Clickbank and Amazon allow publishers at all levels of web traffic to place contextual ads in blog posts.
သူက ရောင်းချလိုသူတွေကို ကော်မရှင် တမျိူးနှင့်ယူပြီး ကျွှန်တော်လို တဆင့်ရောင်းသူ ကိုတော့ ကော်မရှင်တမျိုးနှင်ြ့ပန်ပေးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူက အဆင့်မများတော့ ပေးနိုင်တယ် မှန်မှန်ကန်ကန်လဲပေးပါတယ်၊ ရတဲ့ ခံစားခွင့်ကော်မရှင် % ကတော့ နည်းတာပေါ့ဗျ၊ ၅% နှင့် ၁၅%လောက်ပါဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ တံဆိပ်တွေလိုချင်တာတော့မရဘူးပေါ့ဗျ၊ blogs မှာတွေနေရတဲ့ ကျော်ငြာတွေက ဒါတွေပါဘဲ၊ ကျွှန်တော်အခုထိ internet marketing Google က ရမဲ့ အင်တာနက်မှာ ကော်မရှင် % က $၈၅.၅၀ ရနေပြီ ဒါပေမဲ့ $ 100 မပြည့်သေးလို့ အခုထိလွဲမပေးသေးဘူးဗျ.... ၃နှစ်ရှိပြီလေ.....
ဒါပေမဲ့ သူတို့ကလဲ MULTI-LEVEL MARKETING AND PYRAMID SELLING (PROHIBITION) ACT(CHAPTER 190)
အထူးသဖြင့် အာမခံ ဆိုတဲ့ Insurance တွေလဲ ဒီ network marketing စနစ်ကိုဘဲသုံးရတာပါဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ဒီ အာမခံတွေမှာ က သူဥပဒေနှင့်သူရှိပြီးသားပါ။ စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး အောင်မြင်တဲ့ သူတွေမှ လိုင်စင်ရပြီးလိုင်စင်ရှိတဲ့ သူတွေဘဲ အာမခံစနစ် အကြံပေးတွေ လုပ်လို့တာ မဟုတ်ဘူးလား!
ဒီ Multi-marketing လို့ခေါ်တဲ့ အများကွန်ယက်ဈေးကွက်အရောင်းစနစ်ကတော့ ဈေးရောင်းတဲ့ သူတွေအတွက် တကယ်တန်းအကျိုးရှိတယ် မရှိတယ်ဆိုတာတော့ အသေချာမသိရပါဘူး၊ အမှန်တကယ် အကျိုးရှိသွားကျတဲ့သူတွေကတော့ အပေါ်က လုပ်ငနးစတင်တဲ့လူတွေပါဘဲ၊ ဘာမှမလုပ်ရဘဲနှင့် အချိန်တို်င်းအသင်းဝင်တွေတိုးလာသလို သူတို့ကတော့ ခံစားခွင့် ကော်မရှင် % ရာခိုင်နှုန်းတော့ အချိန်တိုင်းမှာ ရနေပါတယ်၊ အောက်ခြေက အရောင်းသမားလေးတွေကတော့ ကော်မရှင် % ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်နှင့် နိုင်ငံခြား သွားရလို့ ပျော်နေတာဘဲ ရှိပါလိမ့်မယ်၊ အခုအမိမြေမှာလဲ အလကားအသင်းဝင်နှင့် သင်းပြည့် အသင်းဝင်ဆိုပြီး လုပ်လိုက်သေးတယ်၊ ရတဲ့ ကော်မရှင်က အချိုးစားမတူဘူးပေါ့ဗျ၊ သင်းပြည့် အသင်းဝင်ဖြစ်ဖို့ တယောက်ကို ကျပ် ၁သိန်း($ ၁၂၀) တောင် ပေးရတယ်တဲ့၊ လူအယောက်ပေါင်း ၁၀၀ x ၁၀၀, ၀၀၀= ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ရှိနေပြီလေ၊ လူပေါင်း၁၀၀ ကနေ ၁၀,၀၀၀ ထိဖြစ်နိုင်တယ်တွက်တာကြည့်တော့ဗျ၊လူ ၁သောင်းဆိုရင် ကျပ်သိန်း ၁သောင်းဗျ ၊ $ 1M ကျော် နေပြီနော်၊ သူတို့တတွေဆက်ပြီး အလုပ်ကျမယ် ထင်ပါသလား? ကျွှန်တော်အမြင်တော့ ၃-၄နှစ်လောက်ဘဲ လုပ်ပြီး ပျောက်သွာနိုင်တယ်လေ..
နိုင်ငံခြားသားကုမ္ဗဏီဆိုရင် အမိမြေက ရွှေတွေက သိပ်ပြီးအထင်ကြီးကျတယ်ဗျ၊ တကယ်တန်း သေသေချာချာတွက်ကြည့်လိုက်ပါ သူတို့ အမိမြေကိုလာတာ နိုင်ငံတကာမှာ ၀င်တိုးလို့မရလို့ နောက်ဆုံးမှ ဘာမှမဖွံဖြိုးသေး ဘာဆိုဘာမှမသိသေးတဲ့ ဘာဆိုဘာမှပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ အမိမြေလိုနိုင်ငံနှင့် အမိမြေကလူတွေကကို တခါစားဖြစ်ဖြစ် လာလူလည်ကျကြည့်တာပါ၊ တခြားအမိမြေထက် စီးပွားရေးလုပ်လုို့ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံနေရာတွေ အများကြီးပါ၊ သေသေချာချာကြည့်လိုက်ရင် သိနိုင်ပါတယ်၊ အခုလုို အမိမြေမှာ ဘာဥပဒေမှ စိုးမိုးမှုမရှိတာကို လာအခွင့်ကောင်း ယူပြီးလူလည်လာကျမဲ့သူတွေ အများကြီးပေါ်ထွက်လာအုံးမှာပါ၊ သတိတာ ထားပေတော့လုို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အမိမြေက ဒီ multi-marketing ကုမ္ဗဏီတွေ အခုချိန်ထိ အရောင်းသမားလေးတွေ မိမိရသင့်တဲ့အချိုးခံစားခွင့်အပြည့်အ၀ ရတယ်လို့တော့ မကြားမိပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ချုပ် လိုက်ရင် ပေးရမဲ့ခံစားခွင့် ငွေကြေးအတွေကို တွက်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ မပေးချင်လောက်အောင် များပြားနေလို့ မပေးကျတော့ တာပါ၊ အမ်ိမြေမှာဒီ multi-marketing နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘာဥပဒေမှာပြဌာန်းထားခြင်းမရှိတော့ လိမ်လို့ကောင်းတာပေါ့၊ ဒီလိုလိမ်သွားကျတတဲ့ ကုမ္ဗဏီကြီးတွေဆိုရင် အပတ်စဉ် ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ် လူကြားအောင်းအောင် ဘုန်းကြီးတွေကို ဆေးတွေလှူပြီး လူထုတွေကို အယုံကြည်ရအောင်သွင်း ထားလိုက်ကျတာ သူတို့ပြောတဲ့ ကားဈေးထောင်ဂဏန်းရှိနေချိန်မှာ မာစီးဒီးကားရသွားတယ်လို့တော့ မကြားလိုက်ဘူးဗျ.... အဲ! နိုင်ငံတကာကိုတော့ ပို့ပေးတာတော့ရှိပါတယ်....ဘုရားဖူးပုံစုံနှင့်ပေါ့၊
ဒါပေမဲ့ အခုလို IT အင်တာနက်အရောင်းစနစ်တွေမှာလဲ ဒီ Network Marketing နက်ဝလ်မက်ကင်းတင်းစနစ် တွေနှင့်ဘဲ စခန်းသွားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
Is Multi-Level Marketing(MLM) Legal?
No, multi-level marketing (MLM) is not legal. It is governed by the Multi-level Marketing and Pyramid Selling(Prohibition) Act. But there are exceptions to the rule, embodied in the Multi-Level Marketing and Pyramid Selling (Excluded Schemes and Arrangements) Order.
Insurance companies are exempt from the Act, thus insurance companies can keep their network of insurance agents. Master franchises are also exempt. For example, if you own the Delifrance brand, you can recruit those who want to set upaDelifrance store. They can pay you to use the brand and it would not be illegal.
Direct selling is inamore delicate area. The legality of the operation would probably lie in how it is structured. It is not exactly improper to have to pay for the right to marketabrand of product. It is also common to have incentives for bringing in new salespeople. But the key question is, do the participants profit from the sales of the people they recruit, or do they profit from the recruitment of the people?
The aim of the Act is to prevent unsustainable pyramid-selling. If the business derives profits mostly from the recruitment of new members, it is probably unsustainable and illegal. Whenalong-lost ‘friend’ contacts you to join his marketing team, keep this in mind. Contact the Commercial Affairs Department (CAD) at 6325 0000 if you suspectabusiness scheme of being an illegal MLM scheme.
The Ministry of Trade and Industry administers the Act. More information can be found on its website.
Most commonly, the salespeople are expected to sell products directly to consumers by means of relationship referrals andword of mouth marketing. Some people use direct selling asasynonym for MLM, although MLM is only one type of direct selling.
Companies that use MLM models for compensation have beenafrequent subject of criticism and lawsuits. Criticism has focused on their similarity to illegal pyramid schemes, price fixing of products, high initial entry costs (for marketing kit and first products), emphasis on recruitment of others over actual sales, encouraging if not requiring members to purchase and use the company's products, exploitation of personal relationships as both sales and recruiting targets, complex and exaggerated compensation schemes, the company and/or leading distributors making major money off training events and materials, and cult-like techniques which some groups use to enhance their members' enthusiasm and devotion
ဒါက multi-marketing ရဲ့ ဥပဒေလေးတွေပါ....ဒီမှာဝင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ...ဘာတွေလဲလို့...
MULTI-LEVEL MARKETING AND PYRAMID SELLING (PROHIBITION) ACT(CHAPTER 190)
What is Multi-Level Marketing (MLM) and Pyramid Selling?
How do I recogniseapyramid selling scheme?
Why is thereaneed to have an Exclusion Order?
Why is thereaneed to amend the Exclusion Order?
What were the amendments made in 2001 to the Exclusion Order?
When did the amended Exclusion Order come into effect?
Where can one obtain the amended Exclusion Order?
What are the penalties for being in breach of the MLM Act?
What would happen to "innocent victims" who participated in pyramid schemes unknowingly, and who did not benefit in any way before the scheme closed down?
Is thereaspecial license required to conduct those types of businesses listed in the Exemption Order?
Can the operators and members of the public seek the Government's advice on the legality of their business schemes?
ဒါက multi-level Marketing ရဲ့မကောင်းတဲ့ အချက်လေးတွေပါ....
ဘယ်လောက်ဘဲ ဈေးကြီးကြီး တံဆိပ်ဘလောက်ဘဲကောင်းကောင်း နှစ်ကုန်ရင် Promotion ဆိုတာရှိရမှာပါ ၃၀% ၅၀% ၇၀% ဆိုတာရှိကျတော့ bands ကိုမှကြိုက်ကျသူတွေ သူရာသီနှင့်သူစောင့်ဝယ်လေ့ရှိပါတယ်...
အခု MLM ကတော့ ပေးထားတဲ့ ကော်မရှင်ကလဲ ၂၀% ၃၀% လောက်ဘဲ ပေးထားတော့ ကြာလာရင် လျှော့ဈေးနှင့် အများဆုံးဆိုလို့ ၃၀% လောက်ဘဲ ရှိတတ်ပါတယ်...နောက်ပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ တံဆိပ်တွေလဲမဟုတ်ကျတော့ လူတွေ နောက်ပိုင်းမှာ ဈေးကြီးတာချင်းတူတာတောင် အာမခံရှိတဲ့ နာမည်ရှိတံဆိပ်တွေကိုဘဲ နောက်ပိုင်းမှာ နားလည်လာကျပြီး ၀ယ်ယူတတ်ကျပါတော့တယ်၊ နှစ်ကြာလာတော့ တဖြေးဖြေး အ၀ယ်မရှိ နောက်ထပ်လဲ အသင်းသားအသစ်တွေရှာမရလို့ လုပ်ငန်းရပ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေလဲ အများကြီးပါ...
This article will analyze four problem areas with MLM. Specifically, it will focus on problems of I) Market Saturation, II) Pyramid Structure,III) Morality and Ethics, and IV) Relationship Issues associated with MLMs. Thus, you can properly assess your "instincts."
အခုနောက်ပိုင်း Multilevel Marketing (MLM) တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေတ်စားလာပါတယ်။
တချို့ဆို ဘွဲ့ရပြီး တခြားအလုပ်မလုပ်ဘဲ MLM မှာmember အဖြစ် ၀င်လုပ်ရုံနဲ့ သူဌေးဖြစ်မယ်ဆိုပြီး
MLM စနစ်နဲ့ ဈေးကွက်ရှာတဲ့ထဲက တချို့ကုမ္ပဏီတွေကmember တွေ စည်းရုံးတဲ့အခါ ကိုယ့်အောက်မှာ
member ဘယ်နှယောက် ထပ်တိုးလာအောင် စည်းရုံးနိုင်လို့ member level ဘယ်လောက်ရောက် လာရင်တစ်လတွင်း သိန်း ရာချီ အမြတ်ရနိုင်တဲ့၊ အာမခံချက်အပြည့်အ၀ရှိတဲ့၊ နေ့ချင်းညချင်း သူဌေးဖြစ်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခု ဖြစ်သယောင်ယောင် ပြောပြီး စည်းရုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်အောက်မှာ member ၁၀ ယောက်ကို recruitလုပ်နိုင်ရင် သူတို့ဖြန့်တဲ့ပစ္စည်းထဲက ကိုယ်က တစ်လကိုအမြတ်ဘယ်လောက်ရမယ်။ အဲဒီ ၁၀ ယောက်က သူတို့အောက်မှာ နောက်ထပ် ၁၀ ယောက်စီ ထပ်စုနိုင်ရင်ကိုယ်ရမယ့် အမြတ်ငွေဘယ်လောက်။ အဲလိုနဲ့ ဆပွားသွားရင်းနဲ့ ကိုယ့်အောက်မှာ member level ၁၀ ခုလောက်ဖြစ်လာရင် တစ်လတစ်လ သိန်း ရာနဲ့ချီပြီးရနိုင်မယ့်ပုံစံတွက်ပြပြီး သူတို့ဆီမှာ member ၀င်ပြီး သူတို့ပစ္စည်းကိုကိုယ်စားလှယ်ယူ ဖြန့်ဖြူးပေးချင်လာအောင် သိမ်းသွင်းလေ့ရှိပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ မှန်သလိုထင်ရပေမယ့်ဒီအောက်မှာတွက်ပြထားတာကိုကြည့်လိုက်ရင် တကယ့်လက်တွေ့မှာ မဖြစ်နိုင်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ဒီ pyramidscheme နဲ့သွားတဲ့ MLM ကို တားမြစ်ထားကြတာပါ။
စင်္ကာပူမှာဆိုရင် Multilevel Marketing & PyramidSelling Prohibition Act ဆိုတာတွေတောင်ရှိပါတယ်။
``MLM မှာ model တွေ ကွဲပြားစွာရှိပါတယ်။´´နိုင်ငံတော်တော်များများမှာတော့ ဒီ Pyramid scheme/model ကို တားမြစ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ MLM စနစ်သုံးတဲ့ ကုမ္ပဏီတော်တော်
များများကတော့ ဒီ Pyramid scheme ကို ကျင့်သုံးလျှက်ရှိနေပါတယ်။
MLM မှာ initial member level (အမြင့်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ကြတဲ့ Diamond, Platinum စသည်) တွေပဲ
အကျိုးရှိပါတယ်။ အဆင့်နိမ့်လေ၊ ရုန်းကန်ရလေပါပဲ။အမြတ်ရဖို့ မရေရာပါဘူး။
ဆန်းစစ်မှုတခုမှာ member တွေရဲ့ ၉၉.၉ ရာခိုင်နှုန်းကအရှုံးနဲ့ အဆုံးသတ်သွား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတာကို MLM Model တခုဖြစ်တဲ့ အောက်ကပိရမစ်ပုံ member level ကို ကြည့်လို့ ရပါတယ်။member ၁ ယောက်က ၆ ယောက် ရှာပေးရမယ် ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ ၆ နဲ့ ဆပွား သွားတဲ့ ပုံစံပါ။ (အပြင်မှာ သုံးတတ်တဲ့ ၁၀ ယောက် ဆပွားပုံစံဆို ဒီထက်များပါတယ်။)
ထိပ်ဆုံး ၆ ယောက်က အမြင့်ဆုံး level memberတွေပေါ့။ ၆ ယောက်စီ ဆပွားခေါ်လာလိုက်ကြတာ၊
၈ ဆင့်မြောက် member တွေ အလှည့်လည်း ရောက်ရောရန်ကုန်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် နယ်တွေက လူတွေ အားလုံး member ဖြစ်ကုန်ပါပြီ (၁.၈ သန်းနီးပါးပေါ့)။ သူတို့က member သစ် ထပ်ရှာကြရင်တော့ ၁၀ ဆင့်မြောက်မှာ မြန်မာ တနိုင်ငံက ကလေး၊ လူကြီး အကုန်သန်း ၆၀ လောက် member ၀င်မှ ရပါမယ်။ ၁၃ ဆင့်မြောက်ကြရင်တော့၊ တကမ္ဘာလုံး လူကုန်ဝင်ရင်တောင်၊ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ဖို့ ခဲယဉ်းသွားပါပြီ။ နှစ်ကမ္ဘာစာ လူ ၁၃ ဘီလီယံလောက် member ၀င်မှ ရပါတော့တယ်။
MLM ကုမ္ပဏီတွေက ဒီလို တွက်ကြမှာ စိုးတော့member အသစ် ဘယ်နှယောက်ခေါ်လာရင် ဘယ်
အဆင့်တိုးမယ်၊ ဘယ်လောက် အကျိုးအမြတ်ရှိမယ်ဆိုတာမျိုးပဲ ပြောကြပါတယ်။ ဘယ် အဆင့် member တွေ ဘယ်လောက်ရှိပြီ ဆိုတာတော့ ကြေငြာလေ့ မရှိပါဘူး။
ပါးပါးနပ်နပ်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ အဲဒီ အရေအတွက်ကနေ၊ဆပွားအခြေအနေကို ခြင့်တွက်ကြလေရဲ့။
မတွက်မိ၊ သတိမမူမိသေးတဲ့ အဆင့်နိမ့် member တွေကတော့ တနေ့နေ့ပေါ့လေ ဆိုပြီး မျှော်လင့်ချက် မလျှော့ပဲကြိုးစားကြဆဲပါ။ လူကြီးသူမ၊ ဆရာသမား ထဲက အဲလိုmember မျိုးရှိနေပြီဆိုရင်တော့ သူ စိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ ဆိုပြီး ဆွေမျိုး သားချင်းတွေ၊ တပည့်တပန်းတွေက၀ယ်ပေဦးတော့။
(ဒါပေမယ့်လည်း member သစ် မတိုးမှာ စိုးရိမ်တဲ့ တချို့MLM ကုမ္ပဏီတွေက ၇၀ - ၃၀ ဆိုပြီး ကန့်သတ်ထားတတ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ပမာဏရဲ့ ၃၀% ပဲ ကိုယ်တိုင်သုံးခွင့်ရှိတယ်၊ ၇၀% ကိုတော့ တခြားလူ/ member သစ်ကိုရောင်းရမယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့)
ဒီလိုနဲ့ မိမိနီးစပ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူလည်း အဆင့်နိမ့်member ၊ ကိုယ်လည်း အဆင့်နိမ့် member
ဖြစ်နေကြလို့ ဈေးကွက်သစ်၊ member သစ်ရှာလို့မဖြစ်နိုင်တော့ပဲ လုပ်ငန်းရပ်တန့်လိုက်ရတဲ့ သို့မဟုတ်
(လစဉ်) အကျိုးအမြတ် ဟုတ်တိပတ်တိ မရရှာကြတဲ့၉၉.၉ % ၀င်တွေ ဖြစ်နေဆဲပါ။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ညီတဲ့ တကယ့် MLMစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေလား Pyramid Scheme စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေလားဆိုတာသိချင်ရင် အောက်က link ပေးထားတဲ့ page မှာ ရှင်းပြထားတာကို ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Simple explanation for distinguishingbetweenaPyramid Scheme & MLM =>
Posted by Ko Nge at Thursday, August 21, 2014